China yakakura saizi nylon washer fekitori uye vanotengesa | H & F. nylon
saizi: Zvinoenderana nezvinodiwa nemushandisi
zvinhu: mc nylon / nylon
ruvara: Zvinoenderana nezvinodiwa nemushandisi
Nzvimbo yeKutanga Jiangsu, China
Zita Rekushandisa HF
Mhando dzeNylon washer
Inofananidzwa nesimbi simbi, ivo vane yakanakisa kuputira, kurwisa ngura, kudziya kwekupisa uye isiri-magineti zvivakwa, uye akareruka, zvichivaita anoshandiswa zvakanyanya munzvimbo dzakasiyana siyana kusanganisira semiconductors, mota, indasitiri yeaerospace uye kushongedzwa kwemukati. Huwandu hwezvinhu zvinoshandiswa hunosvikawo kumarudzi gumi echinhu, kusanganisira PA66, PC, yakakosha ouinjiniya epurasitiki PEEK ine yakanakisa kuita, yakasimbiswa negirazi fiber RENY nePPS, fluorine resin PTFE, PFA uye PVD.
Nylon washes inogadzirwa nejekiseni kuumbwa maitiro, iyi nzira yekuumba yakafanana nesimboti rekushandisa majekiseni, mutumbi wesinji jekiseni jekiseni muchina, jekiseni fluid inonyungudika epurasitiki mbishi zvinhu, uye kumanikidza kwemunwe pane sirinji. heino hydraulic kumanikidza, iko kushandiswa kweiyo jekiseni kumanikidza kuitira kuti mbishi zvigadzirwa kuburikidza diki gomba inonzi "musuwo" kupinda muforoma mushure megomba! Iwo makuru maficha ndeaya: kugadzirwa kwemazhinji kweiyo yakafanana mhando munguva pfupi yenguva; zadzisa otomatiki kubva pakudyisa mbishi zvigadzirwa kutora izvo zvakaumbwa zvigadzirwa; uye kugona kuburitsa zvigadzirwa zvakaumbwa neakakwira mativi kurongeka uye yakaoma mamiriro. Iwo makuru maficha ndeaya: kugona kuburitsa huwandu hwakawanda hwezvigadzirwa zvakaumbwa zvemhando imwecheteyo munguva pfupi yenguva; iyo yakazara otomatiki yeichi chiitiko kubva pakuisa kwezvinhu zvakasvibirira kusvika pakubviswa kwezvinhu zvakaumbwa; uye kugona kuburitsa zvigadzirwa zvakaumbwa neakakwira mativi kurongeka uye zvimiro zvakaoma. Kune rimwe divi, kudyara mumidziyo kwakakura, uye mutengo weforoma unodhura. Tichifunga nezve kudzikira kweiyo maumburu, zvinogona kutaurwa kuti nzira iyi haina kukodzera kugadzirwa kwe batch diki.
Pashure: Nylon cliver pulley nemutengo wakanakisa
Nhema Nylon Washers
Nylon Bhegi Washer
Nylon Yepamusoro Hat Washer
Zvinhu zvenaironi Washers